विद्यालय, सिनेमा हल र पार्टी प्यालेसहरु पनि ब’न्द गरिने ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारविद्यालय, सिनेमा हल र पार्टी प्यालेसहरु पनि ब’न्द गरिने !
काठमाडाैं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले काेराेना भाइरसको नयाँ लहर फैलिएको भन्दै शिक्षण संस्थाहरुको प्रत्यक्ष पठनपाठन ब’न्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेत्र त्रिपाठीले कोभिड–१९ सं’कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकमा सिफारिसमाथि छलफल हुने बताए ।
मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘नयाँ खाले युके भेरियन्टको असर युवाहरुमा देखियो । हामीले पठनपाठन भर्चुअल माध्यमबाट गरौं भनेर विद्यालयहरु ब’न्द गर्न सिफारिस गरेका छौं । वालवालिकाहरुलाई कुनै जो’खिम नहोस भन्नेमा सरकार ग’म्भीर छ ।’मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य मा’पदण्डमा सबै सचेत नहुने हो भने अवस्था फेरि भ’यावह हुने बताएका छन् ।
विद्यालयमात्र होइन सिनेमा हल र पार्टी प्यालेसहरु पनि ब’न्द गर्न सिफारिस गरिएको छ ।को’भिडको जो’खिम बढेसँगै शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन कक्षालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालका स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ इन्जिनियरिङले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आह्वान गरेका छन् ।